Waddani iyo Waddaniyad, waxaa qorey Maxamed Mosal – dhugasho
maxamedsheekafguun Febraayo 22, 2021 waxbarasho
“Waddani iyo Waddaniyad” waa labo magac oo aad iyo aad muhiim ugu ah mujtamac walba oo ku nool dunida, waxaana dhici karta in ayba aas aas u yihiin nooca xaalada nololeed, mida horumar ee ay ku noolyihiin iyo xitaa mida ah yoolka ay tiigsanayaan mujmacaasu. Hadaba intaanan dhex galin (Waddani iyo Waddaniyad) waxa ay yihiin bal aan marka hore qeexno waa maxahy Waddani iyo Waddaniyad kadibna aan ka jawaabno su’aalaha ah, maxay ku kala duwan yihiin Waddani iyo Waddaniyadi?
Hadaan nahay soomaali ma haysanaa dadkeedii? maxaa inaga maqan oo hadaan helno ay Soomaaliya u soo baxayaan dad ku sifaysan waddaniyiin?
Shucuubta aduunka heer keen kaga jirnaa xiligan marka laga hadlaayo waddaninimo? hada ka hor ma jiray xili ay soomaalidu ku sifaysnayd heer wadaniyad ah ama ay kaga jirtay liistka shucuubta waddaniga ah caaradka hore? Hadaan isku dayo inaan qeexo labadaa eray anigoo ku hormaraya Waddaniyadda waxaan ku qeexilahaa sidatan
Qofka waddaniga ahi wuxuu ka hormariyaa dantiisa tan dalkiisa iyo dadkiisa isagoo aaminsan tiisu inaysan kamaamin tan guud oo la helo
Waddanigu wuxuu ugu dulqaataa dalkiisa markuu caano yareeyo ama marxalad qalafsan uu ku jiro oo dalku aanu kusiin Karin waxyaalaha xiliga barisanmaaad ka aad ka heli jirtay ama aad uga baratay inaad ka hesho
Waddanigu isma waydiiyo dalkaagu muxuu kuu qaban karaa ama ku tari karaa? LAAKIIN taa badalkeeda wuxuu is waydiiyaa Dalkaaga maxaad u qaban kartaa adigu?
Waddanigu goobkasta oo uu joogo iyo nooc walba oo uu yahay (gude ama dibad, arday ama shaqaale, rag ama dumar) waa waddani waxaana lugu yaqaanaa in uusan ka marnayn farahana ku hayo wax dalkiisa iyo dadkiisa anfacaya mar walba si hagar la’aan ahna ugu shaqeeyo
Haddaba su’aasha markiiba madaxaaga kusoo dhacaysaa waxay tahay sifooyinkaa aan kor ku soo sheegnay imisa ayaan leeyahay anigu? Waa su’aal noo furan dhamaanteen.(2)Jawaabaha su’aalihii aan hor ku soo xusay intooda kale (2,3,4, iyo 5) duuduub baan uga jawaabayaa anigoo kuhormaraya jawaabta su’aashii ahayd “Annaku hadaan nahay Soomaali ma haysanaa waddaniyada dadkeedii ?”
Dhalinyaradii SYC/ SYL
Kuwii naftooda u huray dalkooda xiliyadii gumaystaha halganka lugula jiray iyo kuwo kale oo badan…